Silver Sea Media
MYANMAR LIVESTOCK & FISHERY NEWS
အကျိုးအမြတ်များစွာဖြစ်စေနိုင်မည့် အစာ၊ ဆေးဝါးနှင့် ထိန်းသိမ်းမှုမလိုအပ်သော ကမ်းရိုးတန်းဒေသ ပုစွန်မွေးမြူရေး ကျောက်တန်းမြို့နယ် မရမ်းဇွဲဘာတွင် အောင်မြင်နေ
ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၂၂
ရန်ကုန်၊ ဧရာဝတီနှင့် ရခိုင်အပါအဝင် ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင် ပင်လယ်ရေနှင့်အ တူ ဝင်ရောက်လာသည့် ပုစွန်များကို ကန်ပိတ် ကာ မွေးမြူလေ့ရှိကြသည်။ သို့ရာတွင် ယခင်က တစ်ဧကလျှင် ပုစွန် ၂၀-၂၅ ပိဿာမျှ ထွက်ရှိ ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ ပုစွန်ဝင်ရောက်မှု ကျ ဆင်းလာသဖြင့် အထွက်နှုန်းအလွန်အမင်းလျော့ နည်းသွားခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျောက်တန်းမြို့ မရမ်းဇွဲဘာဒေသတွင် မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးမင်းမောင် မောင်က မြန်မာရေသတ္တဝါ မွေးမြူရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း (MYSAP) အကူ အညီဖြင့် ပုစွန်သားပေါက်မှာယူကာ အစာ၊ ဆေးဝါးနှင့် ထိန်းသိမ်းမှုမလိုအပ်သော ပုစွန် မွေးမြူရေးကို လုပ်ကိုင်ခဲ့ရာ အောင်မြင်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
MYSAP က ကျွန်တော်တို့ကို လေ့လာ ရေးခရီးအဖြစ် အင်ဒိုနီရှားနိုင်ငံကို ခဏပို့ ပေးပါတယ်။ ပြန်လာတဲ့အခါမှာ ကန်တွေကို သူတို့ကိုယ်တိုင်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့ ဒီနေရာမှာ မြေတောနဲ့ မိတ်ဖက်တဲ့ ပုစွန်မွေးမြူတဲ့လုပ်ငန်း ကို အကောင်အထည်ဖော်ရင် ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင် စဉ်းစားပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ကန်တွေမှာ ပိုင်းလော့ပရောဂျက် ၁၁ လပိုင်း ၁၅ရက်နေ့မှာ စခဲ့ပါတယ် ဟု ဦးမင်းမောင်မောင်က ရှင်းပြသည်။ ၄င်းသည် ၁၁ လပိုင်း ၁၅ ရက်နေ့တွင် MYSAP အကူ အညီဖြင့် ချောင်းသာမှ ပုစွန်သားပေါက် ၁သိန်း မှာယူခဲ့သည်။ MYSAP က နည်းပညာနှင့် သယ်ယူစရိတ်အပါအဝင် အခြားလိုအပ်သည့် အကူအညီများကို ထောက်ပံ့ပြီးမွေးမြူသူက သားပေါက်တန်ဖိုးကို စိုက်သည်။ မွေးမြူရာ၌ အစာ၊ ဆေးဝါးနှင့် ထိန်းသိမ်းစရာမလိုအပ် သောကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ဝန်ထမ်းလိုအပ် ချက်မှာ များစွာသက်သာသည်။ ကန် ၁မီတာ ပတ်လည်တွင် သားပေါက်တစ်ကောင်နှုန်းထည့် ပြီး ၅၂ရက်တွင် ၄ ဒသမခွဲ အရွယ်အစားရရှိ ကြောင်း၊ ရက်ပေါင်း ၁၂၀ တွင် အလေးချိန် ၂ ကျပ်သားထိ ကြီးလာနိုင်ပြီး ရှင်ကျန်နှုန်းမှာ ၉၇ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရှိကြောင်း၊ ရေ၏ အမိုးနီး ယားဓာတ်သည် အမြဲတမ်းကင်းစင်ပြီး ဝဒသမ ၁သို့ပင် မရောက်ရှိကြောင်း၊ ရေအရည်အသွေး (alkali) သည် ၁၀၂-၁၀၇ ရှိပြီး pH ၇ ဒသမ ၄ မှ ၇ ဒသမ ၈ သာရှိကြောင်း၊ ၁၅ရက်ကြာ ပြီးနောက် ပုစွန်သုံးစင်တီမီတာခန့် အရွယ်အ စားရရှိမှသာ ကန်သို့ ထည့်မွေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဥရောပသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က ဒီဇင်ဘာ ၁၈ရက်တွင် ဒုတိယအကြိမ် လာရောက်စစ်ဆေး ခဲ့ပြီး အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြောင်း၊ မတ်ဒုတိယ အပတ်တွင် ကန်ဖော်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးမင်း မောင်မောင်က ပြောဆိုသည်။
ထို့အပြင် ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် GIZ တို့က ယူရိုငွေ ၂၁ ဒသမ ၅သန်းဖြင့် MYSAP ကို အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသော်လည်း ငါး ပုစွန်သားဖောက်စခန်းနှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းကဲ့သို့ အရေးကြီးသည့် အစိတ်အပိုင်းများ ရုပ်လုံးပေါ် လာအောင် ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ကြောင်း မြန် မာနိုင်ငံ ငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေအ တွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းကြိုင်က အထက်ပါ နည်း လမ်းအတိုင်း ပုစွန်မွေးမြူရာတွင် သားပေါက် ရရှိရန် အရေးကြီးပုံနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ထောက် ပြသွားခဲ့သည်။
ဆိုခဲ့ပါနည်းလမ်းဖြင့် မွေးမြူသည့်ပုစွန် အား ecoshrimp ဟု ခေါ်ဆိုပြီး နိုင်ငံတကာ မှလည်း လိုလိုလားလား ဝယ်ယူကြကြောင်း၊ သာမာန်ဗနားမီးပုစွန် ၁ကီလိုဂရမ်လျှင် ၆-၁၀ ဒေါ်လာသာရရှိပြီး ပုစွန်ကျား ecoshrimp ၁ ကီလိုဂရမ်လျှင် ၂၅-၃၀ ဒေါ်လာထိ ဈေးမြင့် ကြောင်း၊ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသည် ၁၉၃၀ ကီ လိုမီတာရှည်လျားပြီး ရေအရည်အသွေးမှာလည်း အထူးကောင်းမွန်သည့်အတွက် ecoshrimp
ပုစွန်မွေးမြူရေးမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အလွန် အလားအလာကောင်းသော စီးပွားရေးလုပ် ငန်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းပုစွန်တင်သွင်းမှု တားဆီးရန်လိုဟု ပုစွန်အသင်းဆို
၂၀၂၀ ပြည့်တွင် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ မြန်မာ့ငါးပြတိုက် ဖွင့်လှစ်ရန် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိ
ရေကြီးဆုံးရှုံးသွားပါက ငါးကန်များသို့ ငါးသားပေါက်များ အခမဲ့ ထောက်ပံ့မည်
ငါးမဖမမ်းရကာလတွင် ရာနှုန်းပြည့်ပိတ်သိမ်းမှုကြောင့် လုပ်သားအချို့အခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်နေရ
မဲခေါင်ဒေသတွင် ရေသတ္တဝါမွေးမြူရေးနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ လေ့လာမှုစီမံကိန်း ဆောင်ရွက်
အီးယူမှ ရေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများ ပေးထားသော်လည်း အစိုးရဘက်မှ ခိုင်မာသောမူဝါဒ ချမှတ်ပေးရန် လိုအပ်
ရေထွက်ကုန် ပြည်ပတင်ပို့မှု ဒေါ်လာသန်း ၆၁၀ကျော် ရရှိပြီးဖြစ်
ရေသတ္တဝါမွေးမြူရေးကဏ္ဍ ပိုမိုဖွံ့ ဖြိုးရန် အိန္ဒိယအစီအစဉ်များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်
တီလားပီးယားငါးတွင် Streptococcus iniae ဘက်တီးရီးယားပိုး ခံနိုင်ရည်ရှိသော QTL ရှာဖွေတွေ့ရှိ
No. 892/B, 3rd Floor, Kha 8 Street,
Myothit, Insein, Yangon. Myanmar. 11011
Copyright © 2019 Silver Sea Media.
Developed by Imedia International (Myanmar) Co.,Ltd.